Birthday Wish For Mother Suu (June 19/2021) – PVTV Myanmar
Linnor linnor says:
2021-06-20 at 12:29 AM
2021-06-20 at 12:33 AM
2021-06-20 at 1:28 AM
2021-06-20 at 3:07 AM
I wish youavery Happy Birthday 🎂🎊🎉🎈🎁 🥂🍾❤️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
2021-06-20 at 4:24 AM
2021-06-20 at 4:41 AM
thura koko says:
2021-06-20 at 4:45 AM
မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံး ငွိမျးခမျြး ပါစေ
2021-06-20 at 4:46 AM
yatu tintlwin says:
2021-06-20 at 6:05 AM
Thik Gyi says:
2021-06-20 at 6:49 AM
2021-06-20 at 7:50 AM
2021-06-20 at 7:53 AM
2021-06-20 at 8:05 AM
Happy Birthday, Mother Suu. Respect to you all . . .
မအလ အကြမ်းဖက် ခွေးထောင်ချောက်မှ ဒေါ်စုနှင်ဘအတူ တတိုင်းတပြည်လုံး လူမှု့ ဒုတ်ခ ဆင်းရဲမှု့အပေါင်းမှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေဗျား
လေးစားပါတယ် ညီအကို အပေါင်းတို့ အားလုံး ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ
2021-06-20 at 8:46 AM
ပြည်သူတွေရှိနေသ၍ ကျွန်မကော NLD party ကော ထာဝရရှိနေမည်တဲ့👍
မ ငုဝါ says:
2021-06-20 at 9:35 AM
2021-06-20 at 2:36 PM
2021-06-20 at 6:18 PM
2021-06-20 at 10:28 PM
ဘယျနရောရောကျရောကျ အမွဲပွုံးနိုငျပါစေ အမေ🌷🙏
2021-06-21 at 12:19 PM
U Sitt says:
2021-06-21 at 3:17 PM
သခေါနီးမှမွနျမာနိူငျငံပွနျလာပွီး ဘုရငျမလုပျ‌ခငျြတဲ့စုကွညျကို မှေးမမေထေကျခဈြနလေိုကျကွတာ မငျးတို့ကောငျတှအေသလေေးမှေးလာရမာ
မှေး နေ ဆု တောင်း သူ အား လုံး ကို
၅၀၅ ကခဂဃ နဲ့ဝရမ်းထုတ် မယ် ကွား တ ယ်။
DoDonot DoDonot says:
2021-06-26 at 3:58 PM